Ilmo laga xaday isbitaal ku yaal Dammam ee Sacuudiga oo 20 sano kadib ay kulmeen Aabiisa… – Hagaag.com
Posted on 19 Febraayo 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Warbaahinta Sacuudiga ayaa sheegtay in muwaadin Cali Al-Khunaizi uu la kulmay wiilkiisa Musa, oo in kabadan 20 sano looga afduubtay gudaha isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee magaalada Dammam.
Baraha bulshada ayaa lagu baahiyay cajalado fiidiyow ah oo ku saabsan daqiiqadihii ugu horreeyay ee isaraga dhex maray aabaha iyo wiilkiisa laga heystay, “aabaha ayaa muujiyay farxad aan la qiyaasi karin markii uu la kulmay wiilkiisa.”
Adeegsadayaasha Twitterka ee Sacuudiga ayey waxay la falgaleen sheekada afduubka iyo sida ay dib u ugu laabteen qoysaskooda, waxayna u muujiyeen taageero qoysaskaasi, oo sanadihii la soo dhaafay ay soo mareen dhibaatooyin aan la koobi karin.
Mas’uuliyiinta ayaa tilmaamay inay ka shakiyeen haweenay u codsatay waraaqo rasmi ah laba nin oo dhalinyaro ah oo markii dambe ay noqdeen ilmihii la qafaashay markii ay dhasheen wax ka badan 20 sano ka hor, kadibna booliska waxay xireen haweeneyda.
Booliska Gobolka Bariga ayaa soo saaray bayaan goor hore, iyagoo leh, “Waxaan ku helnay cadeynta hanaanka baarista, su’aal weydiinta iyo baarista DNA-ga waxa ka dhaxeeya labada dhalinyaro iyo dacwad horey loo gudbiyey oo ku saabsaneyd qafaalashada caruur markaasi ku dhalatay gudaha isbitaal ka mid ah isbitaalada magaalada Dammam.”
Booliska Bariga ayaa intaa ku daray in “ilmihii ugu horreeyay (Al-Amari) la waayey 24/04/1417 Hijri, kan labaadna (Al-Khunaizi) la waayay 08/04/1420 Hijri, sidaa darteed halkaasi lagu reebay howsha inta ay ka dhamaystirmayaan nidaamka isku bedelka iyo qaadista talaabooyinka ku habboon ee sharci.